यी कुरा अनिवार्य गोप्य राख्नुहोस्, नत्र तपाईंलाई नै हुन्छ हानी – Ujyaalo Patrika
यी कुरा अनिवार्य गोप्य राख्नुहोस्, नत्र तपाईंलाई नै हुन्छ हानी
हामी मन मिलेको मानिस वा साथीलाई आफ्ना बारेमा सबैकुरा खुलस्त भन्दछौ । मानिस आफूलाई खुला हृदयको देखाउन सबै कुरा साथीहरुमाझ सार्वजनिक गर्दछन् । तर कतिपय अवस्थामा केही कुराहरु जति नै हितैषि भए पनि नबताउनु उपयुक्त हुन्छ ।
मानिसको जीवनमा केही गोप्य कुरा हुन्छन्, जो आफ्ना निकटका साथीभाइ वा आफन्तलाई समेत बताउनु हुँदैन । कतिपय कुरा श्रीमान/श्रीमती वा आमा–बुवासँग समेत भन्न नहुने पनि हुन्छन् । साथिभाइ त आमा–बुवा र श्रीमान/श्रीमतीभन्दा टाढाको बिषय हो । तसर्थ आज हामी मानिसले गोप्य राख्नु पर्ने ४ कुराबारे चर्चा गर्दैछौ :
गोप्य राख्नुपर्ने कुरा
१. श्रीमान् श्रीमतीबीचको विवाद, मायाका कुरा, मतभेद वा यौ७ नका कुरा साथिभाईलाई बताउनु हुँदैन । यदि यी कुरा मन मिलेको भन्दै साथीभाइलाई सुनाउनु भयो भने भोलीका दिनमा ती साथीसँग मनमुटाव भए उसले बदला लिन यसलाई सार्वजनिक गर्न सक्छन् । तसर्थ श्रीमान श्रीमतीबीचका कुरा सकेसम्म कसैलाई भन्नु हुदैँन ।
२. आजको व्यावसायिक युगमा धेरैले व्यवसाय चलाउन व्यक्ति वा बैंकसँग ऋण लिन्छौ । तर आफूले लिएको ऋण वा आफूलाई परेको आर्थिक समस्याका बारेमा कसैलाई पनि भन्नु हुदैँन । तपाईं आफुले लिएको ऋणबारे वा आफ्ना ऋणीबारे अरुसँग कुरा गर्नु भएमा तपाईं ऋण डुब्नु भएको ठानी उनीहरुबाट हुनसक्ने सहयोग बन्द हुन्छ । साथै तपाईंको प्रभावसमेत ती ब्यक्तिहरु माझ घट्दै जान्छ ।
३. आजकल धेरै मानिसमा आफुले गरेको सहयोगलाई प्रचार गर्ने बानी छ । सहयोग गरेर यसलाई सार्वजनिक वा प्रचार गर्नु राम्रो हुदैँन । तपाईंले गरेको काम, सहयोग, मानव धर्म वा पुण्य अरुले चर्चा गरुन् तर आफैले आफूले गरेका सहयोग, दान वा उद्धारका कुरा प्रचार गर्नु राम्रो हुदैँन । तसर्थ यस्ता कुरा गोप्य राख्नु नै उत्तम हुन्छ ।
४. कुनै संर्घषपछिको प्राप्ती वा सामान्यभन्दा ठुलो पदमा पुगेपछि मानिसमा अहंकार आउन सक्छ । उ आफूलाई सबैले मानुन् भन्दै आफू को हुँ भनेर हिड्न थाल्दछ । तर मानिसको पछाडी तपाईंको मापन गर्ने सयौं हुन्छन् । तसर्थ आफ्नो पद वा क्षमताको बारेमा सबैलाई भन्नु भन्दा समय आउँदा प्रर्दशन गर्नेगरी गोप्य राख्नु पर्दछ । तर यसको मतलब तपाईंको कला, सिर्जना वा रचना लुकाउनु होस् भन्ने चाहिँ होइन ।
Previous विवाह अगाडि हुनेवाला जीवन साथीसँग अवश्य सोध्नुस् यी प्रश्न ?
Next खुशीको खबर : क्यानडा गएर अध्ययन गर्न चाहनेहरुको लागि , यस्तो छ नयाँ प्रावधान
खुशीको खबर : क्यानडा गएर अध्ययन गर्न चाहनेहरुको लागि , यस्तो छ नयाँ प्रावधान
विवाह अगाडि हुनेवाला जीवन साथीसँग अवश्य सोध्नुस् यी प्रश्न ?